Maintsokely Info. About. What's This?
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia arachide. Ny zava-bolena lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia canne a sucre. Ny isanomby dia 3270. Ny isanny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelanny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia arachide. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 70 ny mponina no miasa tany. 25 ny mponina no miasa aminny fiompiana. 5 ny mponina no miasa aminny sampandraharaha. 2 no isanny kisoa.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia traktera. Ny faharetanny dia mankany aminny renivohi-paritany dia 34 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 40 ora. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 125000 Fmg. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny haintany dia 125000 Fmg.
1 isan-jatonny mponina no tena mahantra dia mahantra. 50 isan-jatonny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavanny vanim-potoana mety ahalanianny vokatry ny taon-dasa dia 3 volana. 1 isan-jatonny mponina no atao hoe manan-karena. 48 isan-jatonny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ny isanny vono olona tanatinny taona 1999-2001 dia 7. Tapaka in-3 ny lalana tao anatinny taona 1999-2001. Ao aminny atao hoe faritra mena ilay kaominina. Ny isanny vakitrano tanatinny taona 1999-2001 dia 30. Ahitana polisy ao aminilay kaominina.